♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: နတ် ဗေဒင်အယူအဆ နဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓအမြင်
နတ် ဗေဒင်အယူအဆ နဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓအမြင်
မြေး နှစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး .ကနားပွဲသွားကြည့်တာ..ဟိုလဲရောက်ရော မြေးနှစ်ယောက်ကို အရှေ့ ဆုံးမှာ ပေးထိုင်ခိုင်းပြီး ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ဝင်ကတာ..ကနေတဲ့ အခြောက် ကနားစီးတွေ လန့် ဖြန့် ကုန်တာတဲ့. နတ်ပွဲမှာက သူတို့ လူအချင်းချင်းပဲ ပူးကြတာများတယ်.အပြင်လူမပူးတော့...အခု တစ်ကယ်ထင်တာပေါ့..ပြာပြာသလဲနဲ့ 
မှင်သေသေ နဲ့ဟဲ့ ငါဘာဖြစ်တာလဲ ငါ့မြေးတွေရောဆိုတော့...
ချမ်းချမ်း အမြဲလုပ်နေတဲ့ အဓိဌာန်ယတြာလေးတစ်ခု လက်ဆောင်ပေးမယ်နော်...
ငါ့ကိုလာမေးကြတယ်လို့ အမျက်ဒေါသထွက်ပြီး မင်္ဂလာပွဲ ပျက်စေဖို့...
ကဲ..သူငယ်ချင်းတို့ ရော..ဘယ်လို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်လဲ...
Post....By......ချမ်းချမ်း(၇ွာသူလေး) 1:25 PM . http://www.haymonchhan.blogspot.com
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ် at 3:25 AM
သိစေလိုတဲ့ အကြောင်းရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားထိုက်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ချမ်းချမ်း၊.....
ဗဟုသုတရော၊ မှန်ကန်စွာ ကိုးကွယ်တတ်ဖို့ရော သိမြင်လိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓအမြင်တွေကို အများမြင်သိအောင် ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ.....ဟု ဆန္ဒပြုလျှက်...........
အစ်မ အားပေးပါဆိုလို့ အခုရေတောင်မချိုးရသေးဘူး လာဖတ်တာလေ မှတ်သားထိုက်တဲ့ စာလေးတွေပါ။ ကျွန်တော်သိတဲ့နတ်ကတော့ အကုန်အကျ သက်သာတယ် သိလား... ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ရယ် ထမင်းဖြူရယ် အဲ့ဒါနဲ့တင်ရတာ ဘာနတ်လဲတော့ သိဝူးးး
Jurong West မှာခုအိမ်ရှင်က၃၇ကောင်ထဲကဘာကောင်ကိုဆက်တာလဲတော့မသိMarlboroဘူးမပြတ်ဆက်တာ...ထူးဆန်းတာကဆေးလိပ်ကုန်ကုန်သွားတာ???ကျနော်ယူယူသောက်တာ...ဟီးဟီး
အမှတ်မထင်ပဲ ဒီစာမျက်နှာပေါ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အမှားအယွင်းတခုကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ ကက်သလစ်၊ အင်္ဂလီကန်ကျောင်းတော်တို့ ရဲ့ ယုံကြည်ရာထဲက ရဟန္တာသူတော်စင် (saint) တွေဟာ နတ်ကုိုးကွယ်မှုနဲ့ တနည်းတဖုံဆင်တူပါတယ်။ အချို့ saint တွေဟာ ဂရိ၊ရောမ နတ်ဘုရားတွေကုို ခရစ်ယာန်theologyနဲ့ ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင် ထားတာဖြစ်တယ်လို့ scholar တွေကဆိုပါတယ်။ထို့နည်းတူ Sts Barlaam & Josaphat လို့ ပွဲတော်နေ့ တခုတည်းမှာ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်အချို့ က အောက်မေ့ကျင်းပတဲ့ ရဟန္တာသူတော်စင်နှစ်ပါးအနက် St Josaphat ဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ဘ၀စဉ်ကို ခရစ်ယာန်အယူဝါဒနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်ထားပြီး ကိုးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ အထောက်အထားရှိပါတယ်။ (မိမိဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓနဲ့ ဖော်ပြပါ St Josaphatတို့ အသွင်နှစ်မျိုးနဲ့ တပါးတည်းဖြစ်တယ် လို့ လက်ခံတဲ့ အလျောက် St Josaphat အဖြစ် ဗုဒ္ဓကို ခရစ်ယာန်liturgy အရ ဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။)